ह्यान्डबल स्टारको अबको बाटोे | KhelkudNews.com
ह्यान्डबल स्टारको अबको बाटोे
Published on March 12, 2017, by Manoj Shiama - Posted in Featured, Handball, Slideshow 2
आम नेपालीको एउटै बाध्यता । ब्यक्तिगत जिवनको ब्यबस्थापनमै आफूलाई केन्दि«त गर्नै पर्ने । यसैविच क्यारियरको बारे पनि साच्नै पर्ने । एउटा खेलाडीका भिन्न चरण । अझ भनौ स्टारको हकमा देखिने तीन चरण उदय, लामो समयको प्रभाव र अन्त्य । खेलाडी जिवनको अन्त्य कसरी ? धेरैको मनमा उठ्ने यो प्रश्न, ह्यान्डबल राष्ट्रिय टोलीकी कप्तान रञ्जना राइको मनमा उठ्न थालेको छ । पौने दशक राष्ट्रिय टोलीमा साखपूर्ण र ओजीलो उपश्थिती पछि भारतमा भएको १२ औ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पनि नेपाली टोलीको नेतृत्व उनैले गरेकी थिइन् । उनकै नेतृत्वमा केही प्रतियोगितामा सफलता पाएको नेपाली टोली सागमा विविध कारणले पदक जित्न असफल भएको थियो । उनलाई साग खेलमा पदक जित्ने अझै चाहना छ । काठमाडौमा हुने साग खेलमा पदक जित्नु पर्छ भन्ने ध्येय भएकी उनका सामु जिवनमा चुनौती पनि देखिएका छन् ।
नियमित राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण नहुनु एउटा समस्या । उनको आफ्ना समस्या पनि छन् । आम नेपालीको झै जिवनयापन र खेल जिवनलाई ब्यबस्थापनको तालमेल उनका लागि असहज झै पनि देखिन्छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा प्रसासनको कर्मचारी । यसैकारण, नियमित प्रशिक्षणमा समस्या । १३ औ सागमा पदक जित्नकै लागि भए पनि प्राबीधीकको रुपमा काम गर्दै प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिने उनको चाहना त छदैछ । यसको चाजो पाजोँ मिलाउने को हो ? सायद उनलाइ नै थाहा छैन ।
खेल जिवन पछि ह्यान्डबल विना बाच्न कठिन हुने बताउने रञ्जनाले सायद यसैबाट धेरै पाइन् । राष्ट्रिय तहमा उपाधि । अन्तराष्ट्रिय तहमा पदक । लामो समय नेतृत्व । यसै बर्ष राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी संघबाट अवार्ड । सबै प्रशिक्षक र टिमका साथीसंग उत्तिकै खुसी । बेजोड ढंगले यो बाटोमा अगाडी लगाउने पार्वत गुरुङ्ग, ब्यक्तिगत र खेल जिवन दुवैमा अभिभावक बनेकी ह्यान्डबल प्रशिक्षक विन्दा थापा पनि यही भेटिन् । धेरै असल मान्छेको संगत । एक दशक पुग्न आटेको यो यात्रामा उनले सम्झने धरै नाम हुन सक्छन्, जो प्रति उनी आभारी छिन् ।
फेरी मनमा उब्जने एउटै प्रश्न , अबको बाटो के ? उनले एसियन ह्यान्डबल महासंघको प्रशिक्षक कोर्षका बारे खोजी गरिन् । कोर्ष आम नेपालीका लागि महंगो नै हो । उनले यो कोर्ष छाडीन्, खेल जिवन पछि प्रशिक्षक बन्ने चाहना छाड्न सकेकी छैनन् । रञ्जनाका लागि १३ औ सागको पदक र खेल जिवन पछि प्रशिक्षक बन्ने चाहना उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आशा गरौ, धैर्यता र मिहेनतकी प्रतिक उनले यी दुवै बाटोमा सफलता पाउने छिन् । यो कस्मेटिक दुनियाले गएको आठ बर्षमा ह्यान्डबल खेलमा उनको ओजश्वी शानलाई चासो दिएन होला । परन्तु शालीन, र अनुशाषित यी ब्यक्तित्वको आगामी सफलता यसकारण पनि आबस्यक छ की, यसले पुष्टि गरोस लगातारको मिहेनतले सफलता नै हात लाग्छ । उनलाइृ चिन्ने खेलकर्मी बिश्वस्त छन् की, उनी प्राबीधीक कर्मचारी भए र प्रशिक्षक कोर्षको अबसर पाए अबका दुवैे गन्तब्यमा उनी सहजै यात्रा गर्ने छिन् ।
2 Comments on "ह्यान्डबल स्टारको अबको बाटोे"